रंगभेदको अन्त्य कहिले ? - Racism In Italy
काठमाडौँ — चर्चामा छन्, इटालीका किशोर खेलाडी फुटबल खेलाडी मोइस केन । चर्चाको एउटा पाटो हो, उनी इटालीको फुटबल भविष्य हुन् । पछिल्ला केही वर्ष इटालीको फुटबलका लागि सुखद रहेको छैन । विश्वकप र युरोमा लगातारको अनुपस्थितिले इटालीको फुटबल कमजोर छ भनेर प्रस्ट देखाएको छ ।
अहिले इटालीको सिरी ‘ए’ को चमक र आकर्षण त्यस्तो छैन, जुन यसअघि हुने गर्थ्यो । रक्षात्मक रणनीतिलाई जोड दिने खास शैलीको इटालीको फुटबल मन पराउनेका लागि यो दुःखको स्थिति हो ।
यसैबीच केनको कुरा उठ्न थालेको हो । यी खेलाडीले आउने दिनमा इटालीको फुटबलका लागि राम्रो गर्नेछ भनेर । उनले इटालीका लागि खासै खेल्ने अवसर भने पाएका छैनन्, किनभने उनी कच्चा नै छन् । भर्खर १९ वर्षका भए । एकाएक पाएको चर्चाले उनलाई बिगार्न सक्छ । त्यसैले नै होला, सायद उनको क्लब युभेन्ट्सले उनलाई विस्तारै परिपक्व बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । युभेन्ट्स र इम्पोलीविरुद्ध केही दिनअघि भएको लिगको खेलमा केनलाई सुरुमै मैदान उतारिएन ।
प्रशिक्षक मासिमिलानो एलेग्रीको तर्क थियो, केन लगातार मिडियामा छाइरहेका छन् । त्यसैले उनलाई जोगाएर खेलाउनुपर्छ । बेन्चमा रहेका केनले त्यस दिन मैदानमा उत्रेको पहिलो ‘टच’ मै गोल गरे र यसै गोल मदतले युभेन्ट्स इम्पोलीविरुद्ध विजयी रह्यो १–० ले । अब खेल काग्लियारीविरुद्ध थियो युभेन्ट्सको । त्यसमा केनले सेन्टर फरवार्डको भूमिका पाए र फेरि आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गरे । युभेन्ट्स २–० ले विजयी रहेको त्यस खेलमा उनको एक गोलको योगदान रह्यो ।
उनले ८५ औं मिनेटमा खेलको दोस्रो गोल गरे । युभेन्ट्स र इटालीका लागि उनले ११ दिनको अन्तरमा चार खेल खेले । चारै गोल गरिसकेका छन् । यस्तोमा उनको यति बाक्लो चर्चा स्वाभाविक पनि हो । तर सबै कुरा यहींनिर टुंगिन्न । खासमा चर्चाको महत्त्वपूर्ण पाटो अर्कै छ । काग्लियारीविरुद्धको त्यसै खेलमा उनले गोल गरेपछि रंगशालाको त्यो दर्शकदीर्घातर्फ मोडिए, जहाँ क्लबका उद्दण्ड समर्थक बस्ने गर्छन् । केनले दुवै हात फैलाएर उनीहरूलाई हेरे ।
उनी शान्त नै रहे । उनको अनुहारमा खासै कुनै ठूलो फ्रतिक्रिया थिएन । खेलका त्रममा उनी काग्लियारी समर्थकको कोपभाजनमा परिरहे । ती समर्थकलाई केनको छालाको रंगमा समस्या थियो । त्यसैले त उनी गोल गरेपछि त्यसविरुद्ध प्रतिक्रिया दिन चाहन्थे, शान्त तरिकाले । तर त्यसपछि पनि काग्लियारी समर्थकको दुर्व्यवहार रोकिएन । त्यो ८५ औं मिनेटको गोलपछि रंगशालामा लगातार बाँदरको स्वरमात्र सुनियो, अश्वेत केनलाई दुर्व्यवहार गर्न ।
ती रंगभेदी समर्थकविरुद्ध प्रतिक्रिया दिन खोज्ने काम स्वयं केनले मात्र गर्न खोजेका थिएनन् । काग्लियारीका कप्तान लुका चेपेटेलीले पनि आफ्ना समर्थकलाई चुप लाग्न अनुरोध गरे । केनका साथी खेलाडी ब्लेसी मतौडीले त रेफ्री पिएरो जिकोमोलीलाई खेल नै रोक्नसमेत भने । पछि रंगशालामा ठूलै स्वरमा पनि भन्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्तै स्थिति रहे, खेल रोकिने छ । त्यसलाई पनि काग्लियारीको समर्थकले उडाउन खोजे, केही पनि नभएजस्तो गरेर ।
तर यो खेलले प्रस्ट देखाएको छ, युरोपेली फुटबलमा रंगभेदी दुर्व्यवहारको चर्को समस्या छ । इटालीको फुटबलमा त यो समस्या झन् चर्को छ । भन्न सुरु भएको छ, यसलाई चाँडै रोक्ने प्रयास भएन भने यसले भयावह स्थितिको रूप लिन्छ । जुन कसैलाई पनि सह्य छैन । अब जसले यस्तो व्यवहार गर्छ, ती समर्थक र क्लबलाई समेत कडाभन्दा कडा कारवाही हुनुपर्छ । युरोपेली फुटबलमा दिन बिराएर यस्ता पीडादायी घटना हुन थालेका छन् ।
यहाँनिर के पनि भन्न सुरु भएको छ भने सबैभन्दा पहिला सोचमै पनि परिवर्तन चाहिन्छ । यो किनभन्दा त्यस खेलपछि युभेन्ट्सकै खेलाडी लियोनार्दो बोनुचीले दिएको स्तब्धपूर्ण प्रतिक्रिया । काग्लियारीविरुद्ध पहिलो गोल गर्ने यिनै खेलाडी थिए । पोस्टम्याच कन्फ्रेन्समा उनले भने, ‘काग्लियारीका समर्थकको दुर्व्यवहारप्रति केनको पनि दोष छ, दुवैको जिम्मेवारी ५०–५० प्रतिशत हो ।’ उनको आशय थियो, केनले काग्लिरीका समर्थकतिर फर्केर किन गोलको प्रतिक्रिया दिनुपर्ने थियो र ?
बोनुचीको यो प्रतिक्रिया धेरै पचाउनै सकेनन् । उनको पनि चर्को आलोचना भयो । पछि उनका नजिकका केहीले बोनुचीलाई बचाउने प्रयास गर्दै भने– सायद उनको आशय फरक थियो, कसैलाई चोट पुर्‍याउनु थिएन । अझ भनौं, उनी रंगभेदी दुर्व्यवहारलाई समर्थक गर्दैनन् आदि आदि । उनले पनि प्रस्ट देखाउँछ, इटालीका खेलाडी स्वयं पनि रंगभेदी र्दुव्यवहारविरुद्ध गम्भीर हुन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई हल्का लाग्छ । यो कुरा र यसले पूरा इटालीको मानसिकताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।
यसका लागि अर्को उदाहरण दिन सकिन्छ । स्वयं काग्लियारीले पनि ट्वीटरबाट माफी मागेको छ घटनालाई लिएर । तर क्लबको तर्क छ, केनले सायद त्यसरी गोलपछि प्रतिक्रिया नदिए हुन्थ्यो कि ? वा क्लबले यो पनि भन्यो, बोनुचीले पनि त्यसै समान स्थितिमा गोलको खुसीयाली मनाएको भए, काग्लियारीका समर्थक आक्रोसित हुने थिए । आइभोरी कोस्ट मूलका केनको समर्थनमा सायद रोबर्टो मान्चिनीको भनाइ धेरै हदसम्म ठीक देखिन्छ ।
इटाली टिमका प्रशिक्षक रहेका मान्चिनीमाथि त्यहाँको फुटबललाई फेरि लयमा ल्याउने ठूलो जिम्मेवारी छ । यिनैले भनेका छन्, ‘काग्लियारीका समर्थकको जस्तो दुर्व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सकिन्न । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनी पनि मान्छन्, यसलाई रोकेर मात्र पुग्दैन, यस्ता निन्दनीय काम गर्नेलाई सजाय पनि दिनुपर्छ । कुनै समय फुटबलमा हुल्याहा दर्शक सबैभन्दा ठूलो समस्या थियो, अब समस्या रंगभेदी दर्शक हुन थालेका छन् । प्रश्न गर्न रोकिन्नुहुन्न, फुटबलमा रंगभेदको अन्त्य कहिले त ?
KOLAKATA KNIGHT RIDERS VS ROYAL CHALLENGERS BANGLORE | IPL Predict the Winner